Mareykanka oo bogaadiyey heshiiska Dowladda iyo Ahlu Sunna
Heshiiska ayaa dhigaya in Ahlu Sunna ay 20-xubnood ku yeelan doonto baarlamaanka cusub ee maamul goboleedka Galmudug.
MUQDISHO, Soomaaliya – Safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa war-saxaafadeed ay soo saartay waxay ku bogaadisay heshiiska ay Khamiista maanta ah ku dhawaaqeen dowladda iyo Ahlu Sunna.
Qoondada Ahlu Sunna ee Golaha Wakiiladda Galmudug ayaa kamid ahayd qodobadii ka taagnaa khilaafka ee dhaliyey dib-u-dhacyadii geedi-u-socodka doorashooyinka Madaxtooyadda iyo Baarlamaanka.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya, Amb. Donald Y. Yamamoto, wuxuu soo dhaweynayaa heshiiskii ay wada gaareen Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka Ahlu Sunna Waljama’a (ASWJ).
Dowladda Mareykanka waxaa ka go’an inay taageerto dadaalladan isla markaana ay hubiso hirgelintooda si Soomaaliya loo gaarsiiyo nabad iyo xasillooni.
Soomaliya 14.02.2020. 10:30
Isqabqabsiga ayaa ka jira doorashadda hogaanka maamulka Galmudug oo Villa Soomaaliya "boobtay".